“သူ” ဆိုတာ ဘယ်လို လူလဲ! | Sanchaung Journal
“သူ” ဆိုတာ ဘယ်လို လူလဲ!
February 15, 2010 wunna	1 Comment
လူ့လောကထဲ သူ နေခဲ့ရတာက ၃၂ နှစ် ၅ လ ၆ ရက် ထဲရယ်ပါ။ ( သက္ကရာဇ် ၁၃-၂-၁၉၁၅ မှ ၁၉-၇-၁၉၄၇ ) နတ်မောက် ဦးသောဘိသကျောင်း၊ ရေနံချောင်း အမျိုးသားကျောင်း နဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွေမှာ ပညာဆည်းပူးခဲ့၊ ၁၉၃၄ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အမှုဆောင်နဲ့ နိုင်ငံရေးဘ၀ စတင်၊ နိုင်ငံရေး လုပ်သက် ၁၃ နှစ်၊ အဓိက ဖြတ်သန်းမှုတွေက ကျောင်းသား သမဂ္ဂ၊ တို့ဗမာ၊ ရဲဘော်သုံးကျိပ်၊ ဖဆပလ၊ သူ့ရဲ့ အဓိက အောင်မြင်မှုကတော့ ( မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး သို့မဟုတ် စတုတ္ထ မြန်မာနိုင်ငံတော် )
ပိုသီပတ်သီ အညာသား။ဘီအေ ကျောင်းသား
သီချင်းကောင်းကောင်း နားမထောင်ခဲ့ရဘူး …..?
ဘိလပ်ပြန်သန်းကို မေရှင့် သီချင်းဆိုခိုင်း ခဲ့သူ၊
ချစ်ရတဲ့ နာစ့်မလေးကြည်ကို လူဋ္ဌားနဲ့ ပိုးပန်းခဲ့ ရသူ။
ဗွီအိုင်ပီ ဆိုတဲ့ စာတန်းကို အလွန် စက်ဆုပ် ရွံရှာသူ။
လမ်းဘေးမှာ ကျောက်ကျောရေသောက်တဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်၊ မင်္ဂလာဆောင်မှာ ခဲဖိုးတောင်းတာ နားမလည် တဲ့သူ၊ လွတ်လပ်ရေးကို စဉ်းစားရင်း စစ်ဖိနပ် ပြောင်းပြန်စီး တဲ့သူ။
မြန်မာပြည် လွတ်မြောက်ရေးကို စဉ်းစားရင်း ဆံပင်ညှပ် မပြီးခင် ထထွက် သွားတဲ့သူ။
တွေ့ချင်လွန်းလို့ လမ်းမှာတားတဲ့ ရွာသားတွေနဲ့ အတူ လမ်းဘေးမှာ အကြော်စားတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်။
သူ့ကိုယ်သူ ပြည်သူတယောက် အဖြစ်ခံယူတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်။
“ ကြည်…ပဲပြုတ်နဲ့ နံပြားရရင် စားချင်တယ် ” လို့ ဇနီးသည်ကို မနက်စာပြင်ခိုင်းတဲ့ သူ့ရဲ့ ကမ္ဘာကျော်စာ/စကား ထားရစ်ခဲ့သူ၊
ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ရဲ့ အမှားနဲ့ သာမန်ရဲဘော် အဆင့်ရဲ့ အမှန်ကို ကွဲကွဲပြားပြား သိတဲ့သူ။
လူငယ်ဘ၀၊ လူ့ဘ၀ရဲ့ စည်းစိမ်အရသာတွေ ခံစားဖို့ အချိန်မရခဲ့တဲ့သူ…
သူ့  ဖြတ်သန်းမှုမှာ
ပကတိ ရိုးရှင်း သန့်စင်ခဲ့တဲ့သူ
နေမ၀င် အင်ပါယာကြီး ဒူးထောက်ခဲ့ရပါသလဲ….?
ဒီ အောင်ဆန်းကို ……
လွတ်လပ်ရေး လမ်းဝမှာ ဘွားကနဲ မြင်လိုက်ရရုံပဲ၊ အောင်ဆန်းရဲ့ဆရာတွေ မှိုင်း၊ မြ၊ ချိုတို့က အစ၊ “”ငါတို့ အားကိုးပါရစေ”” ဆိုလာကြ။
ရှေးဘိုးဘွား မိဘပြည်သူတွေက “”ငါတို့ကယ်မယ့် မင်းလောင်းပေါ်ပြီ”” ပြုံးပျော်ကြ။
လူငယ် သွေးသောက်မြန်မာတွေက “”ငါတို့ စွန့်ပါရစေ”” ဆိုပြီး ရှေ့ထွက်လာကြ၊ စုကြ၊ ရုံးကြ၊ စည်းလုံးကြ။
အောင်ဆန်း အနောက်က ပြည်သူ့ ဒီလှိုင်းလုံးကြီး တွေရဲ့ တ၀ုန်းဝုန်း ရိုက်ခတ်သံဟာ အဲဒီအချိန်က ၀ိတိုရိယ ဘုရင်မကြီးကိုတောင် အိပ်မက်တွေ အေးခဲစေခဲ့ …. သပေါ့။
ရှမ်းတွေက ရှမ်းစကား မဆိုကြ
ကချင်တွေကလည်း ကချင်စကား မဟကြ
ဒီ ပြည်လုံးကျွတ်အားကို စုစည်းနိုင်ခဲ့လိုလည်း၊ အင်္ဂလိပ်တွေက ဒီ အောင်ဆန်း လက်တောက်လောက် နဲ့ တစားပွဲထဲ ၀ိုင်းခဲ့ကြပေါ့၊ အကင်းပါး သူတွေပီပီ မတိုက်မီက ရှုံးနေတဲ့ ဒီစစ်ကို ဒင်းတို့ မတိုက်ဝံ့ကြ မျက်နှာမပျက် အောင်မြင်စွာ ဆုတ်ခွာမယ့် လမ်းကို သူတို့ ရွေးခဲ့ကြ၊ အောင်ဆန်းနဲ့ အတွေ့မှာ။
လွတ်လပ်ရေးကို တရှိုက်မက်မက် တောင့်တတဲ့
နှလုံးသားသန်း ၃၀ အောင်ဆန်းမှာ ရှိတယ်
အောင်ဆန်းမှာ တပြည်လုံး ရှိတယ် …. ရှိတယ်…. ရှိတယ်။ဒီ မျက်လုံး နှလုံးအသက်
ဗို့အား သိန်းသန်းချီ မီးဆလိုက်အားတွေနဲ့
နေမ၀င် အင်ပါယာကို ပြတ်ပြတ်သားသား လှမ်းထိုးလိုက်တဲ့ အခါ
အခြောက်တိုက် ဘ၀င်မြင့် နေသူတွေ
အားလုံး အရည်ပျော် သွားခဲ့ကြ။ဘယ်ရာဇ၀င်မှာ ခင်ဗျားတို့ တွေ့ဘူးလဲ။
မြန်မာလူမျိုးတိုင်းမှာ အဖေနှစ်ယောက်ရှိတယ်၊ တယောက်က ကိုယ့်သွေးသား အဖေ၊ ကျန်တယောက်က မြန်မာ လူမျိုးကို မွေးပေးတဲ့ အဖေ၊ မြန်မာလူမျိုးရဲ့ အဖေ၊ မြန်မာ့အဖေ … အောင်ဆန်းပေါ့။
ကျုပ်အဖေနဲ့ အဖိုးဟာ အောင်ဆန်းသားတွေ
သူ့ အဘိုးကို သူ လွမ်းတတ်နေပြီ
ကျုပ် မှာထား ရအုံးမယ် ….. “မမေ့နဲ့” လို့။ ။
Previous Post(၂)နှစ်ပြည့် စမ်းချောင်းဂျာနယ်Next Postဘာဖြစ်လို့………
One thought on ““သူ” ဆိုတာ ဘယ်လို လူလဲ!”
ဒီ စကား ၃ ခွန်း – ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ပုခုံးပေါ်မှာ ကျေနပ်စွာထမ်းထားခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်တို့ က ကျေးဇူးတရားကို သိတတ်သောသူတွေ ၊
ကျွန်တော်တို့ က အမှန်တရားနဲ့လွတ်လပ်ခြင်းကို တန်ဖိုးထားသောသူတွေ
ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ သခင်အောင်ဆန်း ရဲ့စိတ်ဓာတ် ပိုင်ရှင်ပေါင်းများစွာ ဆက်လက် ခိုင်မာတည်ရှိပါစေ-
မြန်မာပြည်၊ မြန်မာမြေ နဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာ အမှန်တရားနဲ့လွတ်လပ်ခြင်း တွေပွင့်လန်းပါစေ -